We She Me: SingStars
| FLAGS: Baby
သစ်သစ် - 5/8/11, 10:39 PM
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ပျော်နေလိုက်တာ ..
Anonymous - 5/9/11, 12:38 AM
shin - 5/9/11, 1:13 AM
ချစ်စရာလေးတွေ။ တော်တော်ခုန်နိုင်ကြတယ်နော်။ သူတို့လိုတာနေ့တိုင်းခုန်ရင် ဝိတ်ကျမှာဘဲ။ :P
Shinlay - 5/9/11, 1:39 AM
ရီရတယ်။ ခုန်နေကြတာ။ သူတို့ ကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါ။
အလင်းသစ် - 5/9/11, 7:35 AM
...အလင်းစက်များ - 5/9/11, 12:45 PM
သမီးက ပိုပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ပိုရှိပုံရတယ်...။ သူတို့ ကို အားကျလို့ကလေးဘ၀တောင် ပြန်သွားမိချင်သေး.... :( ။
မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါအစ်ကိုနဲ့အစ်မရေ...။
ချစ်ကြည်အေး - 5/9/11, 1:44 PM
အဲလိုသာ ခုန်လိုက်ချင်တော့တယ်......သားနဲ့သမီးလေး ကြည့်ရတာ အမောပြေလိုက်တာ....:))
သက်ဝေ - 5/9/11, 3:24 PM
ချစ်စရာ ပျော်စရာ သားလေးနဲ့ သမီးလေး...
သူတို့နှစ်ယောက် စိတ်လွတ် လက်လွတ် ခုန်နေတာကို တွေ့ရတော့ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုခဲ့တဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗ္ဗန်ဘုံ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး သတိရသွားတယ်...
N/A - 5/10/11, 3:33 AM
rose - 5/11/11, 1:57 AM
They are so cute :) Thar Thar and Mei Mei make me smile. I also want to jump like them :))
ပြည်ကောင်းအောင် - 5/12/11, 11:13 AM
nnm - 5/12/11, 5:33 PM
This time baby I'll be Bulletproof :D So Cute <3
Anonymous - 5/23/11, 6:41 PM
I can't find the post"still same".What happens?It already has great advertisement:):)
Anonymous - 7/4/11, 5:06 AM
Just haveathought whether is therearelationship of spending time on writing posts vs environment. Pls don't take it asapersonal but justageneral thought for all that the bloger spent more time on blogging in SG than in AU.
မြတ်မွန် - 7/22/11, 9:56 AM
Anonymous - 2/7/12, 9:04 AM
ကလေးတှေ ကွီးပွငျးလာရငျ - အဖေ သူခိုးဖေါငျ့ သုံးပွီး သူခိုးလုပျတာ အတျောရှကျရှာမှာ
Myo Thaw - 11/11/12, 9:39 AM
You should love the languages of Burma.
Don't screw it up, please.
▼ 2011 ( 9)
▼ May ( 1)